Alin Thit Social Development Group
Click here to download "Pumflet".
Click here to download "Procurement Policy for ALT".
Click here to download "Financial Manual -ALT".
Click here to download "English Version for Socio Political".
Click here to download "ALT Profile".
Click here to download "ALT profile in Burmese Version".
Click here to download "ALT organogram".
Click here to download "ALT HR policy and disciplinary regualtion".
Click here to download "ALT Cost alocation policy".
Click here to download "ALT Constitution and ByLaws".
အလင်းသစ်လူမှုဖွံဖြိုးရေးအဖွဲ့ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင်ထူထောင်ပြီးမတူညီသော နယ်မြေ အသီးသီးမှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်တူ၊ခံယူချက်တူ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တူ ညီသောစေတနှာ့န်ထမ်းများဖြင့်ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။ အလင်းသစ်အဖွဲတွင် ပှါင်ပတ်သက်သော စေတ နှာ့န်ထမ်းများသည်ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်းကောင်း၊ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင် မတူညီ သောအတွေ့ကြုံကောင်းများ၊ အရည်အချင်းကောင်းများ နှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း၌ဖြစ်စေ၊လူထုတစ်ရပ်လုံး၌ဖြစ် စေ ငြိမ်းချမ်းလုံခြုံပြီး ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ဘှတွင် အတူယှဉ်တွဲနေ ထိုင်ကြသည်။
အလင်းသစ်လူမှုဖွံဖြိုးရေးအဖွဲ့သည်ပြည်သူတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊အသိပညာမြှင့် တင် ပေးခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖန်တီးမြှင့်တင်ပေးခြင်း အားဖြင့်အခွင့်အရေးနည်းပါးသူ ပြည်သူများ၏ လို အပ်ချက်များဖြစ်သည့် ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရန် သန္နိဌာန်ပြုပါသည်။
အလင်းသစ်လူမှုဖွှံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းများမြှင့်တင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ငြိမ်း ချမ်းရေးနှင့်ပတ်သက် သောအသိပညာပေးခြင်း လုပ်ငန်းများ၊ နည်းပညာအကူအညီပေးမှုများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ်များကိုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဦး တည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ပြည်သူလူထု၏ စာှးတ်နေရေးဖူလုံမှုလုပ် ငန်း များ၊ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဘက်စုံဖွံဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ၊ လူထုအခြေပြုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစီမံ ချက်ရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းများ နှင့် လုပ်ငန်းစွမ်း ရည်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဦးတည်စီမံ ကိန်းအဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူသားခြင်းစာနာ ထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းများအဖြင့် မြေမြုပ်မိုင်း အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ သဘှာဘေး အန္တာရာယ်လျော့ချခြင်း အသိပညာပေးလုပ်ငန်း များ၊ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးတည်စီမံကိန်း များ အဖြင့်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။
အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း(၆)ဖွဲ့ကို စွမ်းဆောင် ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့် ကယားပြည်နယ် တွင် ထိခိုက်ဖြစ်ပျက် လွယ်သော ပဠိပက္ခများကို စောင့်ကြပ် စီစစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး တည် ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ထိရောက်စွာ ကြာှးင် ဆက်သွယ်ပေးရန် နှင့် ပြည်သူလူထု များကို မှန်ကန်သောသတင်း အချက်အလက်များ ဖြန့်ှေပေးခြင်း၊ အမြင်ဖွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့် သူတို့၏ အသံများကိုလည်း ကိုယ်စားပြုပေးရန် ဖြစ် သည်။ ၄င်းသည် လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေသော တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး နှင့် လာမည့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတို့နှင့်လည်းတိုက် ရိုက် သက်ဆိုင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကယား ပြည်နယ်တွင်ရှိသော အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အ စည်း များ၏အခန်းကဏ္ဍ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေ ရန်အတွက် ရှာဖွေရန်လည်းဖြစ်သည်။
၁။ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏အခန်းကဏ္ဍ များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်နယ်အစိုးရနှင့်သော် လည်းကောင်း၊ KNPP အပါအှင်အခြားသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ များတို့နှင့် အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမှုများ၊
၂။ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲအစည်းများကို ပဠိပက္ခ များနှင့်ပတ်သက်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ စောင့် ကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း နှင့်အသွင်းကူးပြောင်းခြင်းဆိုင် ရာစွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့်ပတ် သက်သော အပစ်အခတ်ရပ်စဲခြင်းဆွေးနွေးမှုများ အပါအှင် လာမည့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမည့် မှုဘောင်များ နားလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေး ခြင်း၊ ထို့အပြင်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအသိအမြင်များကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း (ကယားပြည်နယ်၏အခြေအနေ များကို ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုတစ်ရပ်ပြုလုပ်ခြင်း)၊
၃။ ကယားပြည်နယ်ရှိပြည်သူလူထုများသည် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊နိုင်ငံ ရေးအခင်းအကျဉ်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသိအ မြင်များပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေရန် ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းများဖြန့်ှေပေးခြင်း၊
၄။ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲအစည်း (၅) ဖွဲ့၏ လူထု နှင့် ဆွေးနွေးခြင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်များမြှင့်တင် ပေးခြင်း ( မြို့နယ်အလိုက် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ ပြည်သူများ၏ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို စောင့် ကြည့်ခြင်း၊ မြေပုံပြုစုခြင်း)၊
၅။ ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ အရပ်ဘက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက် မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူများ ၏ဦစားပေးမှုများပှါင်သည့် သဘောထားမှတ် ချက်ကို ပြည်နယ်အစိုးရထံသိုလည်းကောင်း၊ KNPP အပါအှင် အခြားသောနက်ကိုင်အဖွဲ့အ စည်းများထံသိုလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီ များထံသိုလည်းကောင်း ပေးပို့ခြင်း၊
No.633, Khun Li road, Narnattaw ward, Loikaw Township, Kayah state, Myanmar.
Phone - +95 09-254-191-055
Email: admin@alt-socialgroup.com, alt.myanmar.2014@gmail.com, didi.david@gmail.com, zakomo.alt.org@gmail.com
© 2018 Alin Thit Social Development Group. All Rights Reserved | Powered by Freelance Web Service